Mayelana ZHENGXI - Chengdu Zhengxi umfutholuketshezi Izinsiza kusebenza Ukukhiqiza Co., Ltd.
Chengdu Zhengxi umfutholuketshezi Izinsiza kusebenza Ukukhiqiza Co., Ltd. itholakala eQingbaijiang Free Trade Zone enhle yaseChengdu. Le nkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-45,608, kufaka phakathi indawo yokusebenzela enzima engama-30,400 metres ayisikwele. Kungumkhiqizi omkhulu wezisebenzi zemishini yokubacindezela eChina. Le nkampani ine onjiniyela ezingaphezu kuka-100 kanye nochwepheshe kanye inqwaba kazwelonke okusungula patent. Igcine ukubambisana okuseduze namanyuvesi amaningi aziwayo asekhaya kanye nezikhungo zocwaningo isikhathi eside futhi izibophezele ekubeni yiphayona lobuchwepheshe embonini yomshini wokubacindezela.
Imikhiqizo eyinhloko yale nkampani, efana nemishini eyinhlanganisela yemishini yokubacindezela, imishini yokuqinisa umfutholuketshezi, impuphu yokwakha imishini ye-hydraulic, ukwakha imishini ye-hydraulic, nokuqondisa imishini ye-hydraulic, kwamukelwe kahle ngamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe.
Ukuze kusetshenzelwe kangcono amakhasimende, iZhengxi Group futhi isungule amagatsha amabili: I-Chengdu Zhengxi Robotics Co., Ltd.-egxile kwimishini ye-hydraulic yomshini othomathikhi nemishini engenamuntu; I-Chengdu Zhengxi Smart Technology Co., Ltd.-egxile kusevisi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa ukusekela ukunikezwa kwezingxenye zokungcebeleka. Bonke abasebenzi benkampani benza imizamo engapheli yokuthi "uZhengxi" abe ngumkhiqizo owaziwa umhlaba wonke!
Inkampani yethu ikhulisa ukusetshenziswa kwezindinganiso zikazwelonke nezimboni, ilawula ngokuqinile inqubo ngayinye, iqinisekisa ikhwalithi yengxenye ngayinye. Ngemuva kokuthi imishini isingene kumakhasimende ethu, sizokwenza ucwaningo oluphelele mayelana nokusebenza kwemishini yethu, bese sithuthukisa ubuchwepheshe nekhwalithi yethu. Siphinde safinyelela isitifiketi se-ISO9001: 2008 ne-CE. Le nkampani inkulu kakhulu futhi inenqubo ephelele yokwenza imishini esifundazweni saseSichuan.
Inkampani yethu ine amasethi ezingaphezu kuka-60 imishini imishini eqondile. Njengo-Japanese heavy duty lathe, Vertical lathe, Compound boring and milling machine, grinder etc. And also with a superior technical team, more than 100 professional technical staff. Bazozama konke okusemandleni abo ukuthola imishini enhle kumakhasimende ethu. Sine umnyango ezimele emva-ukudayiswa, olunzulu emva-sales service for amakhasimende. Kungakapheli amahora ama-2 etholile ucingo lokulungisa, inkinga yafinyelelwa kungakapheli amahora ayisishiyagalombili esifundazweni saseSichuan nangamahora angama-48 ezweni lonke. Futhi unjiniyela wethu uzohlinzeka ngemisebenzi yaphesheya kwezilwandle futhi.
Amaklayenti Around The Umhlaba
Vakashela isitshalo sekhasimende lethu nxazonke imbulunga
Dala umkhiqizo ohola phambili embonini.
Nikeza umshini ophephe kunazo zonke, ozinze kakhulu futhi osebenza kahle kakhulu.
Khokha ukulingana okulingana, intengo ilingana nenani, futhi wenze abasebenzi, amakhasimende, abaninimasheya nabahlinzeki isimo sokuwina.